Chibuku Road to Fame/ Mwezha wemukurumbira neChibuku
Vamwe vari bishi kutsvaka mukurumbira nekuridza magitare shasha iyi yaitotengesa rayo neUSD50. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015.
Mbiri inoshandirwa pachokwadi, hazvina hazvo kuita mwaka uno. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Zvinotoda zvidavado zvakasiyana-siyana kuti usumudze mukombe. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Ndinobhururuka ndiwane yanguwo mbiri hama. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Zvachinoita Chibuku kana chakubata. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Changamire vakashaya akaviga, kwakutozoonekwawo nevaiva vainda kuChibuku Road to Fame. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Utsi hwenyama hauteyi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Handidzokeri ndakabata maoko. Muimbi weboka ravaimbi rakawana mubairo weChitatu paChibuku Road to Fame. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Kushandira mukurumbira kunoda kuwirirana. Kunyangwe zvakapotsa hazvo mwaka uno. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015
Tomurangarira nemazwi, mbira, ngoma nehosho Chenje...
Chibuku Road to Fame/ Mwezha wemukurumbira neChibu...